Yenza isithunzi sokwenyani ngeFotohop ngokukhawuleza | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Yenza isithunzi sokwenyani ngeFotohop ngokukhawuleza
Yenza isithunzi sokwenyani nge Photoshop ngokukhawuleza ukuya phucula iimontage zethu zeefoto kwaye ufumane rKubungcali ngakumbi kwaye kunomdla. Fumana ukufaka isandla eyinyani kwiiprojekthi zakho zokufota usebenzisa eyona nkqubo iphambili yokubamba ifoto kwakhona.
Izibane kunye nezithunzi zizinto ezisisiseko Esimele ukuyilawula ukuba sifuna ukufezekisa iziphumo ezibonakalayo ezinomtsalane. Ukulawula izibane nezithunzi kuya kuba negalelo emsebenzini wethu ubunzulu kunye nesiqabu ukulawula ukudibanisa imifanekiso kunye nokusingqongileyo ngcono. Funda ukusebenzisa indlela yokwenza yenza izithunzi nge Photoshop ngeziphumo ezizizo.
Yenza isithunzi sokwenyani nge Photoshop Yinto elula kakhulu eya kuthi izise ekuthwebuleni iifoto zethu iziphumo ezizizo esizifunayo. Xa ufaka isithunzi, into yokuqala ekufuneka siyazi (ngalo lonke ixesha sijonga ubunyani) yile bazi iindawo zokukhanyaKuxhomekeke kwinqanaba lokukhanya, isithunzi saqikelelwa kwelinye icala okanye kwelinye. Emva kokwazi la ndawo yokukhanya, eyona nto ilungileyo yile Bona izingqinisiso zesithunzi Ukuxabisa ubume bezithunzi zokwenyani kwaye ubhekisele kwezethu. Khumbula ukuba ukuba ufuna ubunyani obukhulu iinkcukacha zibaluleke kakhulu.
1 Yenza isithunzi ngeFotohop
2 Gcwalisa umaleko
3 Lungisa isithunzi
4 Fiphaza isithunzi
5 Thobisa isithunzi
6 Isithunzi kwakhona
7 Ukuphucula ubunyani besithunzi
Yenza isithunzi ngeFotohop
Nje ukuba sibe nengqondo ngombono wesithunzi esiyifunayo, into yokuqala ekufuneka siyenzile yile vula umfanekiso wethu kwi Photoshop. Nje ukuba umfanekiso uvuleke, into esiya kuyenza yile yenza ukhetho lwento apho sifuna ukufaka khona isithunzi. (Kwimeko apho into yethu ilungisiwe kwaye akufuneki siyikhethe, into esiya kuyenza yile peyinta isithunzi ngebrashi emnyama, Kamva siyaqhubeka nesifundo).
Nje ukuba ukhetho lukulungele, into elandelayo esiza kuyenza yile maleko ophindiweyo ngokucinezela iqhosha lasekunene le mouse kwimaleko esifuna ukuyiphinda.
Sigcwalisa umaleko wesithunzi ngombala omnyama. Ukuzalisa umaleko esikhetha kuwo kwimenyu ephezulu yokuhlela / yokugcwalisa. Kuyenzeka ukuba ugcwalise umaleko ngombala ongengomnyama, ukuba sifuna isithunzi esingomelele kangako sinokusebenzisa ithoni ethambileyo engwevu.
Saqala uku lungelelanisa isithunzi ukufezekisa ukubekwa ngokwenyani. Ukwenza oku sikhetha umaleko wesithunzi kwaye ucinezele kulungelelwaniso lokuhlela oluphezulu. Ngokufanelekileyo, sebenzisa iindlela ezininzi ukufikelela kuzo beka umaleko ngeziphumo ezizizo Oko kuyakwenza iziphumo zethu zibe ziingcali ngakumbi.
Siyaqhubeka nokulungelelanisa umthunzi de sifezekise iziphumo ezihambelana neemfuno zethu. Ukuba sijonga ubunyani le nxalenye ibalulekile.
ukuba yenza isithunzi sithambe Into elandelayo ekufuneka siyenzile kukusebenzisa ukufiphala okuncinci kuyo. Ukufaka ukufiphala siya kwipaneli ephezulu kwaye cinezela Icebo lokucoca ulwelo / ukufiphala / igalasi.
Eli candelo lixhomekeke kuhlobo lomthunzi esisijongileyo, izikhombisi ziya kusinceda ukwazi ukuba izithunzi zihlala zixhomekeke njani kwiintlobo zezibane ezizivelisayo.
IPodemos thambisa isithunzi ngaphezulu ukufumana iziphumo ezigudileyo ukuba sinciphisa i-opacity kwaye sigcwalise umaleko wesithunzi. Ukuba isithunzi sethu kufuneka sithambe kwaye sinamandla amancinci, kufanelekile ukusebenzisa olu hlengahlengiso kumaleko.
IPodemos phinda ubambe isithunzi ngokususa iindawo ezithile ngokwenyani enkulu, ayingawo onke amanqaku kwisithunzi afanayo. Ukwenza oku kufuneka yenza umaleko we vector ebekwe kwimenyu esezantsi yolungelelwaniso.
Nje ukuba olu luhlu lwenziwe, into elandelayo ekufuneka siyenzile yile tshintsha amaxabiso ebrashi ukuchukumisa okungangqalanga.
Ixabiso esimele silitshintshe zezi: ukukhanya, ubunzima, ukuhamba. La maxabiso nikuvumela ukuba utshintshe amandla ebrashi xa uphinda ubamba isithunzi. Kancinci kancinci siyazisusa ngebrashi (isebenza njengoluhlobo lweerabha) iinxalenye zesithunzi ezingasinomdla kuthi.
Ukuphucula ubunyani besithunzi
IPodemos ukuphucula ubunyani besithunzi sethu ukuba senza mnyama iindawo ezithile yomfanekiso, umzekelo isiseko sento apho isithunzi sikufuphi okanye kufutshane neendawo apho kuqikelelwa khona isithunzi. Ukwenza oku siza kwenza ifayile ye- Uluhlu lohlengahlengiso lwejika Ukutshintsha el imowudi yomaleko ukusuka kwesiqhelo ukuphindaphinda, sicinezela ulawulo lweendlela ezimfutshane + i ukuya umaleko ojikelezayo. Kancinci kancinci ngoncedo lwebrashi siya kwenza mnyama iindawo zomfanekiso.
Ukufumana umfanekiso emthunzini ngumsebenzi lowo kufuna ixesha kunye neliso elininzi ukuba into esiyifunayo kukufika kwinyani ethathelwa ingqalelo. Olu hlobo lobuchule lunokusetyenziswa kwinani elingenasiphelo leeprojekthi zokuphinda zifotwe, ngenxa yeso sizathu kunomdla kakhulu ukuqala ukuyisebenzisa kwiiprojekthi zethu zemizobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Yenza isithunzi sokwenyani ngeFotohop ngokukhawuleza
Kutheni le nto iAdobe Flash ingumthombo ovulekileyo?
I-Photoshop isebenzisa i-algorithm engaqondakaliyo ukuze imifanekiso yebhanki ingavulwa